स्ट्रेट र सुन्दर कपाल बनाउन चाहानुहुन्छ? घरमै बसी अपनाउनुहोस् यी उपाय पार्लर धाउनु पर्दैन !:: Naya Nepal
काठमाडौँ ।स्ट्रेट हेयर कपालको अर्थ सीधा र चिल्लो कपाल देख्नमा धेरै स्टाइलिश र ट्रन्डी देखिन्छ । यसले तपाईंको समग्र रूपको सौन्दर्यलाई पनि बढाउछन्। महिलाहरू अक्सर स्ट्रेट वा सीधा कपाल प्राप्त गर्न ब्यूटी पार्लरहरू धाउने गर्छन्।
यहाँ कपाललाई स्ट्रेट बनाउनको लागी ब्युटिसियन केमिकल र तातो रडको प्रयोग गर्दछन् । तर यसो गर्नाले तपाईंको कपाललाई ठूलो हानि हुन्छ। यसले स्वास्थ्य र व्यक्तिको बृद्धिमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ। यस बाहेक, त्यहाँ साइड इफेक्टको जोखिम पनि हुन्छ । यो सबै पार्लरमा गर्दा धेरै पैसा खर्च हुन्छ। जहाँसम्म, धेरै थोरैलाई थाहा छ कि तपाईं सजिलै घरमा, राम्रो मुलायम र चिल्लो केश पाउन सक्नुहुन्छ।
यसका लागि, आज हामी तपाईंलाई केहि घरेलु उपचारहरू बताउन जाँदैछौं। यस उपायमा प्रयोग गर्ने सामाग्री तपाई आफ्नो किचनमा नै सजिलैसँग पा्रप्त गर्न सक्नुहुनेछ ।
दूध र महको प्रयोग आधा कप दूधमा दुई चम्चा मह मिसाउने । अझै राम्रो बनाउन केरा पनि मिसाउन सकिन्छ । केरा दूध र महको लेप बनाएर कपालमा लगाउने । यसलाई आधा घण्टा सम्म राख्ने र पछि स्याम्पु लगाएर सफा गर्ने ।
नरिवल र निम्बुको पेष्ट
नरिवललाई पिसेर त्यसमा नरिवलकै दूध मिसाउने अनि कागती हालेर ब्रशले कपलाको रेशा रेशामा लगाउने । अनि १ घण्टा पनि चिसो पानीमा स्याम्पु लगाएर पखाल्ने । यसो गर्नाले पनि कपाल नरम र सिधा हुन्छ ।
तातो तेलले मालिस गर्ने
नियमित रुपमा नुहाउनुभन्दा केहि समयअघि तातो तेलले मालिस गर्ने । मलिस गर्ने बेलामा नरिवलको तेलमा ओलिभ वाईल मिसाउने । केहि बेर पछि तउलियालाई तातो पानीमा भिजाउने र केहि समयपनि तउलिया निचोरेर ४५ मिनट सम्म कपालमा बेरेर राख्ने । त्यस पछि स्याम्पु लगाएर पखाल्ने यसो गर्नाले कपाल सिल्कि र नरम हुन्छ ।
दूधलाई एउटा स्प्रे बोतलमा राख्नुस अनि कपालमा स्प्रे गर्नुस् । यसो गरेर आधा घण्टा सम्म राख्नुस र पखाल्नुस् । यो बिधिले कपाल नरम,चिप्लो र चम्किलो हुन्छ ।
ओलिभ वाईल र अण्डाको प्रयोग
दूईवटा अण्डा फुटाएर फिट्नुहोस र त्यसमा ओलिभ वाईल मिसाउनुस । यस्तो मिक्सलाई कपालमा लगाउनुहोस् र एक घण्टा पछि स्याम्पु लगाएर पखाल्नुस् । यसले कपाल नरम र शिल्की बनाउँछ ।
कागती, तेल र नरिवल
कागती, दुई चम्चा तोरीको तेल र एक कप नरिवलको तेल मिलाएर बिस्तारै हातले कपालमा लगाउनुहोस् । यसले कपाललाई सिधा गर्न मद्दत गर्छ । यो मिश्रणलाई कपालमा राम्रोसँग लगाएर प्लास्टिकले छोपेर २ घन्टासम्म छाडिदिनुहोस् । र त्यसपछि तातो पानीले धुनुहोस् ।